Lenovo Tab2 7/30, Phablet amin'ny vidiny 79 Euros | Androidsis
Ny marina dia fahafinaretana lehibe ny mamakivaky ny Trano heva Lenovo ao amin'ny MWC2015 izany dia tanterahina any Barcelona, ​​ary izany ilay orinasa tompona Motorola, dia manolotra anay teny mahaliana maro. Ambonin'ny zava-drehetra, ireo terminal terminal avo lenta, endrika kanto ary fika manokana momba ny teknika, ao amin'ny a vidiny mihoatra ny nohamarinina.
Izany no raharaha Lenovo Tab2 A7 / 30, Phablet iray manontolo miaraka amina endrika kanto sy kanto, miaraka amin'ny famaritana azo ekena kokoa ary amin'ny vidiny mihena mihoatra ny tsy mihena, tsy azo resena eo amin'ny sehatra misy azy satria azontsika atao ny mahazo azy 79 euro fotsiny. Eto no hanazavana ny teknolojia mahatalanjona an'ny Lenovo Tab2 A7 / 30, ary koa ny fiheverana voalohany anay momba ny fihenan'ity Lenovo Phablet ity.
Lenovo Tab2 A7 / 30 Famaritana ara-teknika
modely Tab2 A7 / 30
efijery Fampisehoana IPS tsy manam-petra 7 "Wide-View IPS
vahaolana 1024 x 600 pika
processeur Mediatek Quad Core ao amin'ny 1'3 Ghz
Fitahirizana anatiny 8 / 16Gb mivelatra amin'ny alàlan'ny slot MicroSD hatramin'ny 32 Gb
Fakan-tsary eo aloha 0'3 Mpx
Efitra Tarsal 2 Mpx misy rakipeo HD
vidiny 79 euro nohamafisin'i Lenovo
Momba ny zavatra niainantsika tamin'ity Lenovo Phablet, ny marina dia ny kely kely azontsika natao mba hitsapana azy amin'ny fijoroan'ny Lenovo an'ny MWC15, Namela antsika tamin'ny fahatsapana tena tsara izy io, nampitaha azy ireo hatrany amin'ireo faran'ny faribolana iray ihany.
Tokony holazaintsika fa ny momba ny fiasan-telefaona tafiditra, noho izany ny anarana Phablet, Tsy hitantsika fa mahazo aina loatra noho ny refin'ny terminal izay tadidintsika dia tsy manana zavatra hafa ary tsy mihoatra ny efijery 7 ″. Raha ny hevitro manokana sy ny zavatra niainako tamin'ny Galaxy Tab 7 first voalohany izay tonga teny an-tsena, miaraka amin'ny safidin'ny antso an-tariby dia sarotra aminao ny manao resaka amin'ny toe-javatra misy habe amin'ny terminal toy izany, ankoatry ny zava-misy fa ianao no ho ifantohan'ny maso rehetra ary afaka mahatsapa hadalana kely ianao.
Raha fintinina dia ny Lenovo Tab2 A7 / 30Safidy fividianana tena tsara ho an'ireo mpampiasa rehetra izay mitady terminal Android misy efijery lehibe izay azo ampifandraisina amin'ny alàlan'ny angona na aiza na aiza no ampiasanao ny karatra SIM.
Araka ny lazain'i Lenovo, ity maodely manokana ity dia hamidy any amin'ny faritany espaniola Ary hananany ireo kinova roa resahina ao amin'ilay horonan-tsary, ny iray manana tahiry anatiny 8 Gb ary iray hafa izay hampiakatra avo roa heny ny fahaiza-manao. Ao amin'ny horonantsary milaza aminao aho fa nanadino ny nanao ny lavaka ho an'ny fakantsary aoriana ny tranga, na dia ny zava-misy aza, nohamafisin'i Lenovo, dia manana modely roa koa ny terminal, ny iray misy fakan-tsary aoriana ary ny iray hafa tsy misy, noho izany ny ny tranga na fonony tsy misy lavaka ho an'ny fakantsary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Lenovo » Lenovo Tab2 A7 / 30 a Lenovo Phablet aseho ao amin'ny MWC15 amin'ny vidiny 79 Euros fotsiny
RAM azo velarina hatramin'ny 32 Gb amin'ny alàlan'ny slot sd ??, tsara izany, heveriko fa tokony ahitsinao izany
Nanana an'io aho nandritra ny herinandro iray, ary tena nivoaka tsara ny marina, dia atoroko azy io na dia ambany be aza ny fakan-tsary misy azy.
Ekipa tsara izy, ny antsipiriany sisa dia ny fakantsary misy azy ary tsara ny fahombiazany
Acer Liquid Z520, ny filokana hafa an'ny mpanamboatra Taiwanese misy efijery 5-inch